के तपाईको छाती दुख्छ ? कतै तपाईलाई यस्तो रोग त लागेको छैन ? – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / के तपाईको छाती दुख्छ ? कतै तपाईलाई यस्तो रोग त लागेको छैन ?
admin January 22, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 120 Views
काठमाडौँ । छाती दुख्नुको अर्थ मुटुकै कारण हो भन्न मिल्दैन, हामी भ्रममा परेर छाती दुख्नुको कारण मुटुमै समस्या भएको ठान्छौ तर त्यो सोचाइ गलत हो ।
फोक्सोको कारणले छाती दुख्दाः लामो श्वास लिँदा वा फेर्दा चस्स छातीको एकातिर९दायाँरबाँया० करङ्मा दुख्यो भने फोक्साको कारणले दुखेको हुनसक्छ । दुब्लो मानिसमा यो समस्या बढी देखिन्छ । यस्तो बेलामा स्वाँस्वाँ हुने ज्वरो आउने पनि हुन सक्छ । निमोनियाको कारणले पनि यस्तो हुनसक्ने डा अनिलको भनाइ छ ।
Previous युवतीको यो तस्बिर किन भयो रातारात भाइरल ?
Next नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, यति धेरैकाे मृ-त्यु !